Home » အသားပေး » Canon ၏ Burbank Reality ဖြစ်လာ
ငါမကြာသေးမီကလာရောက်လည်ပတ်၏ဂုဏ်အသရေခဲ့ကို Canon'' s ကိုနောက်ဆုံးပေါ် (12,000 စတုရန်းပေ။ ) စက်ရုံ, "Canon ၏ Burbank"- အဆိုပါ Professional ကနည်းပညာ & စင်တာ 3400 အနောက်သံလွင်ရိပ်သာ, Burbank ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်အဆင်ပြေအဆိုပါ Burbank စတူဒီယိုနှင့် Warner Brothers အနီးတွင်တည်ရှိသည်။
ကို Canon Burbank အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာရှိပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င်ဒီစက်ရုံဖွင့်လှစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် ဟောလိဝုဒ် အသိုင်းအဝိုင်း! ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ပညာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, ထုတ်ကုန်ပို့လိုက်ကြတယ်, ပြနှင့်ထုတ်ကုန်ဟန်ပြအားလုံးမှာကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ် ကို Canon Burbank ။ အခန်းမရရှိနိုင်ပါနှင့်ပြီးသားစီစဉ်ထားမပါလျှင်ထို့အပြင်, စက်မှုလုပ်ငန်းရှေးရှေးအဘယ်သူမျှမတာဝန်ခံမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုငျပါသညျ! ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပိုင်ခွင့်ကိုဖတ်ရှု! ထိုသို့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမယ့် ကို Canon Burbank လာမည့်စီမံကိန်းများကိုဖြေရှင်းရာမှာသို့မဟုတ်စီစဉ်နေချိန်မှာဓာတ်ပုံဆရာနှင့်ရိုက်ကူးရေးအထောက်အကူပြုဖို့တစ်လမ်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကို Canon စုံလင်သောဖြေရှင်းနည်းကိုရှာတွေ့၌သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့န်ထမ်းများအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ - တနှင့်အတူအံနိုင်စွမ်း ကို Canon သူတို့ရဲ့စက်ရုံအတွက် Pro ကိုညာဘက်!
ကို Canon Burbank ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေကကနေ State-Of-The-Art ဂီယာ features TBC အဖွဲ့စက်များ, ကွမ်တမ်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်SGO.
ငါမယုံကြည်ဘူး ကို Canon ဒီစက်ရုံမှာဘာမှမေ့!
Facility SERVICES ပါဝင်သည်:
Enhanced On-site ကိုပြုပြင်စွမ်းရည်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနစံ 4K Project (Barco 4K DP4K-P ကို) နှင့်ကပစစွမ်းရည်
ဆော့ဖျဝဲသင်တန်းနှင့် NLE Workflows များအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ Lab က
In-depth ကိုကင်မရာ & မှန်ဘီလူးစမ်းသပ်ခြင်း, သရုပ်ပြများနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအဘို့အ Image ကိုဓာတ်ခွဲခန်း
လေ့ကျင့်ရေး, ဖြစ်ရပ်များ, သရုပ်ပြများနှင့်ပစ်ခတ်မှုများအတွက်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားဘက်စုံသုံးအခန်းထဲမှာ
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အ Burbank တည်နေရာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုနားထောငျ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်သူတို့ဘဝသူတို့ရဲ့အနုပညာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုစီမံကိန်းများဆောင်ကြဉ်းရန်လိုအပ်သောအရာကိုသူတို့နှင့်အတူများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်များ၏ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးကိုယ်စားပြုတယ်။ အဖြစ် ကို Canon ထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်း support နှင့်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲရန်၎င်း၏ခရီးဆက်ပြီး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်တစ်သယံဇာတနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များများအတွက် Beacon ဖြစ်မည်ဟု, ယခုအစဉ်အဆက်ထက်ထွန်းလင်းဖြစ်ပါတယ် "ဟု Eliott Peck, အလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌနှင့် Imaging ကမှ General Manager ကရှင်းပြသည် နည်းပညာများ & ဆက်သွယ်ရေးအုပ်စု, ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc
အဲလက်စ် sax, Pro ကိုစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူ, ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc, လူတိုင်းကိုသစ်ကိုစက်ရုံမှာကြိုဆိုကြောင်းကဤသို့ဆို၏ - က DSLR သေနတ်သမားတစ်ခုသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် YouTube ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ဖြစ်, ကို Canon Burbank လူတိုင်းအတွက်တဲ့ resource စင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Reception ဧရိယာများတွင်ဘေးဖယ်ထားပြီးဖြစ်သော "စာအုပ်တင်စင်သတ်မှတ်မည်" မှ ကို Canon'' s ကို C200 နှင့် C700 ကင်မရာများထွက်ပစ္စုပ္ပန် (တဦးတည်းစမ်းသပ်မှုဓာတ်ပုံများကိုထွက် print ထုတ်နိုင်သည့်အပေါ်သို့) ကင်မရာများ, မျက်ကပ်မှန်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပရင်တာ၏ပွင့်လင်း, ဟန်ပြအတွက် ကို Canon'' ကအခြားနောက်ဆုံးပေါ်ဟာယယဇ်ပူဇော်ပါ။ တစ်ခုမှာ ကို Canon'' s ကိုသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲပင်ခင်းကျင်းပြသပါ! လက်ရာမြောက်သောဓာတ်ပုံတွေတစ်ခုအနုပညာပြခန်းများ၏ခံစားမှုထက်တစ်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုစင်တာပေးခြင်း, ရှိသမျှကျော်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။
ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှု, ရစ်ချတ် Hahm, ကြီးကြပ်ရေးမှူး, နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှာ ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc, သူတို့ကနိုင် ရုပ်ရှင်ရုံ EOS ကနေမှန်ဘီလူးတစ်အလုံးအရင်းအားအရာအားလုံးကိုပြုပြင်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာ Lab မှ, Loren Simons သည်, အကြီးတန်းကွင်းဆင်း Applications ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ခုနှစ်, ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc ကဒီအထူးသဖြင့်အခန်းတစ်ခန်းပေါင်းစည်းမှုများအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတို့ရဲ့တည်ဆဲလုပ်ငန်းအသွားအလာသို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြသနိုင်ပါသည် canon ဟာ့ဒ်ဝဲ။ ဒီလိုမျိုး, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်ကြည့်ရှုမည်ကိုမည်သို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးပြု. ကို Canon'' s ကို High-ပြောင်းလဲနေသောနှစ်ဦးစလုံးအကွာအဝေးနည်းပညာနှင့် high-definition ရုပ်မြင်သံကြား (နေ့စဉ်စားသုံးသူများရရှိနိုင်ပါသည်မျိုး) ပြသအများဆုံးအဆင့်မြင့် 4K ရည်ညွှန်းမော်နီတာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအလုပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအယ်ဒီတာများကိုပြသနိုင်ပါတယ်။
တိ Smith ကအကြီးတန်းနည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေး, ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc အဆိုပါ Imaging က Lab မှ - - ကင်မရာမှန်ဘီလူး, မော်နီတာစမ်းသပ်ရာ - အခြားဓာတ်ခွဲခန်းဧရိယာကိုချွတ်ပြသထားတယ်သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဂေဟစနစ်; ဒီသင်နှင့်အတူအစုံပေါ်မှာဆိုရင်တစ်ချိန်ကသေချာပါလိမ့်မယ် ကို Canon ကင်မရာ, သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံအကောင်းတစ်ဦးတည်းဖြစ်၏။
ကဲန်ရိုဝီကနည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေး, ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc ကိုခွင့်ပြုကြောင်းနောက်ခံန်ဆောင်မှုအချို့ကိုပြသ ကို Canon function ကိုမှ Burbank ။ ဤသည် SAN ဆာဗာများနှင့်ပင် Barco ပရိုဂျက်တာများပါဝင်သည်! ဤလူမျိုးသည်ဇာတ်ကားတွေကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သူတို့ကိုကြည့်တာပေါ့ဘယ်လိုကြည့်ဖို့အဓိက post ကိုအိမ်များတွင်ရှိကွောငျးတူညီသောပစ္စည်းကိရိယာများသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ယောသပ်သည် Bogacz, Professional ကအင်ဂျင်နီယာအကြံပေး, ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc, SAN ဆာဗာများ, Aja KUMO44G-SDI ဗွီဒီယိုနဲ့အသံသည် router နှင့် SGO Mistika ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်စနစ်များကိုကြည့်ရှုသည့်အခါဧည့်သည်ပြဇာတ်ရုံအတွေ့အကြုံကိုပေးစေခြင်းငှါ, တစ်ဦး Barco 6464K DP3K-P ကိုပရိုဂျက်တာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးယင်းစိစစ်ခန်းထဲမှာမြင်နိုင်ပါသည် သူတို့ရဲ့ပြီးစီးခဲ့အလုပ်။
ငါ Expresso ကောင်တာမေ့လျော့ချင်ကြပါဘူး - သင်နေကတည်းက ပြီးသားသင်တစ်ဦးအနုပညာပြခန်းထဲမှာနေလျှင်အဖြစ်အဘယ်ပြီးပြည့်စုံတွဲဖက်မှုဒါပေမယ့် Nespresso တစ်ခွက်ကိုလိမ့်မယ်ခံစား? အဆိုပါထု deco'd ဧရိယာအတွင်းထိုင်ဒဏ်ငွေကော်ဖီအိမျသငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင် - နီးပါးသည်သင်တို့အထဲ၌တကယ်နေမေ့လျော့ ကို Canon Burbank ရဲ့စူပါဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင်!
အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရှုထောင့်တစ်ခုမှာဂလိုင်းတခုဖြစ်တယ် Services ။ ယင်းအစဉ်အလာကိုဆက်လက်မှာစတင် ကို Canon'' s ကိုမူရင်း ဟောလိဝုဒ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်လက်လှမ်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုတိုးမြှင့်စက်ရုံ, စီးပွားရေး၏ပထမဦးဆုံးအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးကတနင်္လာနေ့-သောကြာနေ့လမ်းလျှောက်-in ကိုဝန်ဆောင်မှုခံစားနိုငျတဲ့အကြီးစားများနှင့်အဆင်ပြေမြေအောက်ကားပါကင်ဧရိယာနှင့်အတူကစပြီး ကို Canon Burbank သည့်အတွက်၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် clients များ spoils ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ဆဲနေ့စွဲရန်၎င်း၏အများဆုံးအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စက်ရုံနှင့်အတူလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း imaging ။
သူတို့ကပင်သည်အခြားကင်မရာများယူဆောင်လာနှင့်သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့လူတွေကိုအားပေးအားမြှောက်ကြသည် ကို Canon သူတို့ရဲ့အတွက်ကင်မရာများ စက်ရုံ။ ဒါဟာ A / B စမ်းသပ်ခြင်းကို run ဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်တယ်, တိ Smith ကအကြီးတန်းနည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေးကပြောပါတယ် ကို Canon ဗဟို၏ခရီးစဉ်အတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc ။
စတူဒီယိုများအတွက်တစ်ဦးကဆက်ကပ်အပ်နှံထားတည်နေရာ, Post-ထုတ်လုပ်မှု်ဆောင်မှုများ, ရောနှောပေးသွင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းများ, ထုတ်ကုန်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း၏ပြောင်းလဲနေသောရောနှော, ထုတ်ကုန် & လုပ်ငန်းအသွားအလာသင်တန်း, စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များနှင့်အရှိန်မြှင့်ပြီးပြုပြင်ရေးက၎င်း၏တံခါးများမှတစ်ဆင့်ဝင်သောသူအပေါင်းတို့စောင့်ဆိုင်း။ တကယ်တော့, ကို Canon input ကိုကနေအထွက်မှထုတ်ကုန်များနှင့်မြင့်မား-လေ့ကျင့်သင်ကြားဖို့တိုးတက်လာသော access ကို ကို Canon ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကတိုးတက်ကောင်းမွန် ကို Canon ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအဆင့်ဆင့်။
"ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာဓာတ်ပုံနှင့်ကင်မရာကိုအော်ပရေတာများ၏ဒါရိုက်တာကသူတို့ပရောဂျက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရူပါရုံကိုရှိသည်ဖို့သွားနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဘာမှရောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအတွေ့အကြုံနှင့်ထောက်ခံမှုပူဇော်နိုင်ပါတယ် "ဟု Peck ကရှင်းပြသည်။
ကို Canon Professional ကန်ဆောင်မှုများ '(CPS) ဒေသ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံဆရာ, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်များအတွက်အစွမ်းထက်ထောက်ခံမှုကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ထိပ်တန်းပညာရှင်များအနေဖြင့်ပညာရေးဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏တစ်ဦးကတည်ငြိမ်ပြက္ခဒိန်နှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး နည်းစနစ်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ကို Canon တိုက်ရိုက်သင်ယူအစည်းအဝေးများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်း ကို Canon ကင်မရာများနှင့်မှန်ဘီလူးစက်ရုံရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပင်ဘက်စုံသုံးအခန်းထဲမှာစက်မှုလုပ်ငန်းစုဝေးနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များအတွက်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်!
ကို Canon'' s ကိုမတူကွဲပြားမှုများနှင့်ပါဝင်အစီအစဉ်ကိုစစ်ပြန်, မိန်းမနှင့်မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သည်။ ကို Canon မတူကွဲပြားသောနောက်ခံကနေန်ထမ်းကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုဆောင် ခဲ့. ယုံကြည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အခါအမျိုးသမီးများအတွက်မှကြွလာ, ကို Canon ၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ခေါင်းဆောင်များ, လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်နှင့်အလုပ်ခွင်အတွင်းအမျိုးသမီးများ၏ခွန်အားအသိအမှတ်ပြုသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်များတွင်အမျိုးသမီးများ (ပါလိမ့်မယ်) "အကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ထုပ်ပိုးနေတဲ့စတီယာရင်ကော်မတီကဖြစ်ပါတယ်ထံမှ ကို Canon အမေရိကန်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွဲပြားခြင်းနှင့်ခွဲများ / အဘယ်သူ၏အကျိုးစီးပွား, ပါဝငျဖွင့်, အမျိုးသမီးနှင့်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးအားပေးအတူ align affiliates ။ "ကျွန်မဒေါရစ် Higginbotham သမ္မတနှင့်အတူတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်ချက်တင်ခဲ့ ကို Canon အလိုတော်ကိုအကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာန်ဆောင်မှုများ, Inc ။ ပိုပြီးအပေါ်ကိုကြည့်ပါ ကို Canon'' s ကိုက်ဘ်ဆိုက်မှာ: www.usa.canon.com / အင်တာနက် / ပေါ်တယ် / ကျွန်တော်တို့ကို / home / / အလုပ်အကိုင်များ / မတူကွဲပြားမှု-ပါဝင် / အကြောင်းကို
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထုတ်လုပ်သူ အယ်လ် Berman National Geographic ရဲ့ "၏တိုက်ရိုက်မြေကြီးတပြင်"၏ Eliott Peck & Larry က Thorpe နှင့်အတူပုံ, ထိုတိရစ်ဆာနျဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကို Canon Professional ကန်ဆောင်မှုများဖွင့်ပွဲစဉ်အတွင်း ကို Canon Burbank! ဒီတော့သိပ်အခွက်တဆယ် ... အားလုံးလှပ "ကို Canon ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သော National Geographic ဘာသာရပ်များ၏ Capture " ... ယခုသမျှသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား ကို Canon နှစ်ပေါင်းကာလကိုတစ်လျှောက်လုံး, ဒီနည်းကိုတစ်လုပ်မထားဘူးတာဝန်ရှိသည် "ဟု Pretty ရုပ်ပုံ?"
တစ်ဦးကို virtual ခရီးစဉ်နှင့် Burbank စက်ရုံအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက - usa.canon.com/Canon-Burbank
ပြပွဲမီည, ကို Canon ယင်းထက်ကျော်လွန်-လှပသော Castaway စားသောက်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကုသ !!!
ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Burbank California ကို Canon Canon ၏ယူအက်စ်အေ CES2017 Eliott Peck H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC imaging Technologies က & ဆက်သွယ်ရေးအုပ်စု စွဲငြိဖွယ်ရာ Inc က စက်မှုလုပ်ငန်း-စံ 4K စီမံကိန်းများနှင့်ပစစွမ်းရည် isovideo JCT-VC ကို MStar ဘက်စုံသုံးအခန်းထဲမှာ NLE Workflows ဆူညံသံလျော့ချခြင်း On-site ကိုပြုပြင်စွမ်းရည် post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို လုပ်ငန်းအသွားအလာ Lab က	2017-07-16
ယခင်: ဒစ်ဂျစ်တယ်အေဂျင်စီ Internship - 2017 Fall
နောက်တစ်ခု: Canon ၏ Burbank: Facility ခရီးစဉ်
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (526) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)